ဆူဇီ | Myanmar Mp3 Album
Home / Myanmar Artist / အဆိုတော် (မ) / ဆူဇီ
Category Archives: ဆူဇီ
ဆူဇီ – တတိယရန်ခုန်သံ [Heartbeat No.3] (2013) [Album]
[Released: Sep 21, 2013. Genre: Pop. File: Mp3. Quality: 128kbps] ၀၁။ အဝေးကဆုတောင်း ၀၂။ မိုးရေထဲမှာ (feat. Snare) ၀၃။ ချစ်တာအပြစ်မဟုတ်ဘူး ၀၄။ အချစ်ဆုံးက အမုန်းဆုံးလူ ၀၅။ သက်ဆုံးတိုင် ၀၆။ ရင်ခုန်ခြင်း ၀၇။ မြင်ခွင့်မရှိလည်း ၀၈။ ဟိုးတုန်းကလို ၀၉။ တစ်ဦးတည်းသောချစ်သူ ၁၀။ Never End You ၁၁။ ရင်မှာတစ်မျိုးလေးပဲ ၁၂။ မိုးဘယ်မှာရွာနေလဲ ၁၃။ ပျော်ရွှင်ခြင်းလက်ဆောင် (Bonus Track) [feat. ယုန်လေး] [Download Whole Album – 51.54MB] (Mediafire) [Download Whole Album – … Continue Reading →
September 29, 2013 MMA အဆိုတော် (မ) အခွေ (တကိုယ်တော်) ဆူဇီ Myanmar Artist New Myanmar Albums Leaveacomment
VA – နိမိတ်ကောင်း နဲ့ သင်္ကြန် (2013) [Album]
Cautionary to cover possessions subsequent to Tiffany Outlet UK six family building change Forealert to cover possessions subsequently immediately following six your accommodate break-Up period Newslatest newsnational newstraffic not to mention travelbusiness newsvideo newsuniversity newsobituariesweathersportcambridge unitedhistoncambridge cityfootballcambridge rufcrugbycricketracingother sportsnational sportmy areacambridgeelyhuntingdon,eives study neotsnewmarketroyonhaverhillsaffron waldencambournelifeylehealtheducationfashionbeautybusinesshomes gardenrainingmotorsnoalgiaanimal rescuesudokuwhat’s onchoicereviewsnow bookingfamilybooksevents liingsinterviewsmovie newv gossipmusic newsgamingrants ravesyour … Continue Reading →
March 31, 2013 MMA အဆိုတော် (ကျား) အဆိုတော် (မ) အခွေ (အများ) နီနီခင်ဇော် ဆူဇီ ယုန်လေး မိစန္ဒီ Myanmar Artist New Myanmar Albums Leaveacomment
April Queens (ဧပြီဧကရီ)
၀၁။ ဟိုနေရာမှာတွေ့တယ် – ချစ်သုဝေ ၀၂။ အမ်းလိုက်တော့ – ဇမ်နှုး ၀၃။ ကောင်လေးသနားစရာဘဲ – ဆူဇီ + Waiလျှံ ၀၄။ စိတ်လျှော့ – ရတနာမိုင် ၀၅။ မိုးလင်းတာနဲ့ဒီအသံပဲ – ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း ၀၆။ သရဲကြီးဖြစ်လိမ့်မယ် – နန္ဒာ** + ဇေယျ ၀၇။ နားလိုက်စမ်းပါ – တင့်တင့်ထွန်း ၀၈။ နှုတ်ခမ်းလေးမဖွင့်ချင်ဘူး – ရေဗက္က၀င်း ၀၉။ တွဲရုံပဲချစ်လား – စိုးပြည့်သဇင် ၁၀။ အားကိုးမယ်နော် – မေ + ဘရိတ်ကီ ၁၁။ အတူတူနေမယ် – ငယ်ငယ် ၁၂။ အေးဆေးနေပါ – ရွှေထိုက် ၁၃။ … Continue Reading →
March 3, 2009 koyazar အဆိုတော် (မ) အခွေ (အများ) စိုးပြည့်သဇင် ငယ်ငယ် ဆူဇီ ဇမ်နူး ချစ်သုဝေ Myanmar Artist New Myanmar Albums Unreleased Albums နန္ဒာ 15 Comments
ဆူဇီ – ရတုအဆက်ဆက်
၁။ ရတုအဆက်အဆက် ၂။ မကြာခင်မှာ ကြင်နာမယ် ၃။ အိမ်ရှေ့ကစောင့်နေ ၄။ စိတ်ညစ်မှာဆိုး ၅။ မေ့..မှာလား ၆။ စံချိန်လွန် ၇။ စိတ္တဇနေ့ နဲ့ ည ၈။ ဝေးရင်မဖြစ်ဘူး ၉။ ..အတွက် ၁၀။ တမိုးချုပ်ခဲ့ပြီ ၁၁။ မှေးစက်နားခွင့်လေး ၁၂။ ထီးတစ်ချောင်းအပိုယူခဲ့ ၁၃။ မမေ့နိုင် အချိန်တိုင်း ၁၄။ ဘယ်သူမှ ပြန်မပြောနဲ့
June 3, 2008 MusicLover အခွေ (တကိုယ်တော်) ဆူဇီ4Comments
၁။ သတိတော့ထား – ဟဲလေး ၂။ သင်္ကြန်အထာ – သဇင် ၃။ တပည့်ကြီးပဲလုပ်တော့မယ် – ဝေလျှံ သခင် ၄။ ရေမွှေးဆွတ်ခဲ့ – B3 ၅။ စပွန်ဆာမလိုပါ – Babycakes ၆။ အသည်းယားအောင်လုပ်နေလား – ဆူဇီ ၇။ ဖြည်းဖြည်းပက် – ဂူးဂူး ၈။ ပါသွားပြီဟေ့ – အစ္စဏီ ၉။ စိတ်ကူးမယဉ်နဲ့ – ဝေလျှံ၊ ဆူဇီ ၁၀။ ဟိုလိုလို ဒီလို – မိုးဟေကို ၁၁။ ဘယ်မှာစက်တော်ခေါ်နေလဲ – CRAB ၁၂။ နောက်တစ်ယောက်နဲ့မတွေ့ချင် – ငယ်ငယ်
February 25, 2008 mmsong အစ္စဏီ အခွေ (အများ) ဂူးဂူး ရတု ငယ်ငယ် ဆူဇီ မိုးဟေကို ဟဲလေး သဇင် သျှီ သင်္ကြန်သီချင်းများ B3 Babycakes CRAB New Myanmar Albums Waiလျှံ Leaveacomment
၁။ ဘာအတွက် ဘာကြောင့် – ရေဗက္က၀င်း ၂။ ချစ်ရတာသေတော့မယ် – Issani ၃။ နှစ်ယောက်တစ်အိမ်မက် – L လွန်းဝါ ၄။ နောက်ဘ၀မှာများ ဆုံခဲ့ရင် – L ဆိုင်းဇီ ၅။ ချစ်ဦးမှာလား – သဇင် ၆။ ပတ်သတ်ခွင့်ပြုပါ – ဟဲလေး Issani ဒီရမ် ရ။ ကောင်းစားချိန် – ဒီရမ်၊ ဝေလျှံ ၈။ ထာဝရဖြစ်စေ – ငယ်ငယ် ရေဗက္က၀င်း Lဆိုင်းဇီ သဇင် ရတနာမိုင် ၉။ ဘယ်တော့မှ နှုတ်မဆက်နဲ့ .. GoodBye – ဆူဇီ
January 17, 2008 Admin အစ္စဏီ အခွေ (အများ) ရတနာမိုင် ငယ်ငယ် ဆူဇီ ရေဗက္က၀င်း ဟဲလေး သဇင် Lဆိုင်းဇီ Lလွန်းဝါ2Comments